Dib u eegista kiisaska maqaarka Mujjo ee iPhone 11 Pro Max | Wararka IPhone
Mujjo waxay cusbooneysiisay kiisaskeeda maqaarka ee caadiga ah si ay ugu haboonaato moodooyinka cusub ee iPhone-ka la soo saaray, waana lagu sameeyaa iyadoo la ilaalinayo tayada agabyada iyo dhammeystirka ay ku sifoobeen oo ka dhigtay bedelka ugu fiican ee kiisaska rasmiga ah ee Apple. Maqaar tayo sare leh, naqshad aad u caato ah iyo heerka koowaad oo dhammeystiraya taas oo damaanad qaadaysa in waqtiga la dhaafaa aysan dhibaato noqon doonin oo keliya laakiin sidoo kale wuxuu kiiska siinayaa dabeecad shaqsiyeed.
Waxaan tijaabinay labada nooc ee la heli karo, gacmo dhaqameedka iyo kaarka haysta kaarka, oo isna soo gala midab «Alpine Green» cusub oo runti aad ugu muuqda qalabkeena, oo ay sii dheertahay inaad na siiso boos si aan u dhigno laba kaar oo noo oggolaan doona inaan ka tagno jeebka guriga.
Kiiska soo jireenka ah wuxuu leeyahay naqshad cusub oo ku habboon iPhone 11 Pro Max, oo leh laba jibbaaran oo si fiican loogu hagaajiyay qaabeynta muraayadaha saddex-geesoodka ah ee cusub ee kamaradda. Dareenka maqaarku wuxuu ka tarjumayaa tayadiisa wanaagsan waxayna u oggolaaneysaa qabashada aaminka ah ee qalabka, iyo naqshadeeda gabi ahaanba minimalist waxaa kaliya hakad galiyay daloolka kamarada iyo badhanka gariiriye. Xitaa badhannada awoodda iyo mugga waxaa daboolaya maqaarka aadka u fiican, iyaga oo aan saameyn ku yeelanin garaaca wadnaha. Qaabka dhaqameed ma heli doonno tollo ama kala-goysyada noocuu doono ha noqdee, taas oo aan kaliya muhiim u ahayn heerka bilicsanaanta laakiin sidoo kale xagga cimri dherer.
Gudaha microfiber jilicsan wuxuu hubiyaa in birta iyo muraayadda dusha sare ee iPhone-kaaga la ilaalin doono. Cidhifyadiisa dacwadu way kufilan yihiin si haddii aad u dhigto iPhone wajiga hoostiisa aysan waxyeello u geysan doonin shaashadda, qayb ka mid ah isku xiraha Danabka, afhayeenka iyo makarafoonka ayaa gebi ahaanba furan. Kiisku wuxuu leeyahay qaab dhismeed adag oo gudaha ah, taas oo, marka lagu daro ka dhigista kiiska mid adag, waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta terminalka. Marka laga hadlayo ilaalinta dayrta, waxaan filan karnaa difaac caadi ah, ma lahan shahaado militari ama waxyaabo la mid ah. Waa kiis ku habboon isticmaalka caadiga ah, kuwa raadinaya wax qurux badan, waara, khafiif ah oo tayo leh.
Wax kasta oo aan soo sheegnay waa lagu dabaqi karaa kiiska kaarka, kaas oo la kulmaya dhammaan astaamaha kii hore, laakiin sidoo kale leh boos aan ku dhejin karno illaa laba kaar. Jeebkaan waxaa lagu tolay isla maqaarka sida gadaasha kiiska, wuxuuna sidaa ku sameeyaa tolmo muuqda oo xitaa hagaajinaya qaabeynta kiiska. Kaadhadhka daboolku waxyar buu kordhiyaa dhumucda barta, sida muuqata, laakiin weli weli waa mid ka mid ah kiisaska kaararka ugu khafiifsan ee aad ka heli karto suuqa. Midabka cusub ee "Alpine Green" waa mid aad u qurux badan waana la mahadiyey in Mujjo uu ku darsado dabooladiisa midabbo aad u muuqda. Labada nooc ayaa loo heli karaa saddexda nooc ee iPhone-ka ee sannadkan (iPhone 11, 11 Pro iyo 11 Pro Max) oo ku kala jira midabbada Brown, Black, Monaco Blue iyo Alpine Green.
Waxay yihiin nooc ka mid ah sannadaha oo dhan, iyo ilaalinta heerka sannadba sannadka ka dambeeya ma sahlana. Kiisaska maqaarka ee Mujjo ee iPhone-ku waa shaki la’aan beddelka ugu fiican ee kuwa rasmiga ah ee ka socda Apple. Haddii aad raadineysid kiish maqaar qaali ah, dhuuban, adkeysi leh oo leh naqshad la mid ah ta iPhone, kama heli doontid wax ka wanaagsan kuwaan Mujjo. Hadana haddii aad rabto inuu noqdo kaar haysta, waxaad u haysataa tusaalaha ugu habboon iyada oo ay adag tahay in wax dhumucdiisu kordho Qiimaheedu sidoo kale wuu ka hooseeyaa kan daboolka rasmiga ah: laga bilaabo € 40 daboolka caadiga ah on Amazon (isku xirka) iyo laga bilaabo € 55 haddii aan ku dooneyno kaarka haysta (isku xirka).
Kiisaska Hargaha Mujjo
Qalabka fasalka koowaad iyo dhammeystirka
Cimri dherer wanaagsan
Naqshad aad u taxaddar badan
Ikhtiyaarka haysta kaarka ayaa la heli karaa
Ilaalin caadi ah, oo aan ka sareyn
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Dib u eegista kiisaska maqaarka Mujjo ee iPhone 11 Pro Max
Habka cayaaraha badan ee Mario Kart Tour ayaa imaan doona bisha Diseembar